विन्डोज १० मा IP ठेगाना विवादास्पद समाधान गर्न W तरीकाहरू - दरहरु
विन्डोज १० मा IP ठेगाना विवादास्पद समाधान गर्न W तरीकाहरू
विन्डोज पीसी वा ल्यापटप पपअप त्रुटि सन्देश देखाउँदै विन्डोजले आईपी ठेगाना द्वन्द्व पत्ता लगायो र यस विन्डोजको कारणले नेटवर्क र इन्टरनेट जडान गर्न असफल भयो? जब दुई कम्प्युटरहरूको एउटै नेटवर्कमा उस्तै IP ठेगाना हुनुपर्छ, तिनीहरू इन्टरनेट पहुँच गर्न सक्षम हुनेछैनन् र उनीहरूले माथिको त्रुटि सामना गर्नेछन्। उस्तै नेटवर्कमा उही आईपी ठेगानाले द्वन्द्व सिर्जना गर्दछ। विन्डोजको नतिजा हो IP ठेगाना विवादास्पद त्रुटि सन्देश। यदि तपाईं पनि उही समस्या भइरहेको छ पठन जारी राख्नुहोस् हामीसँग पूर्ण समाधानहरू छन् विन्डोजमा आईपी ठेगाना द्वन्द्व समाधान गर्नुहोस् आधारित पीसी।
सामग्रीहरू देखाउनु १ मुद्दा: विन्डोजले आईपी ठेगाना द्वन्द्व पत्ता लगायो दुई किन आईपी ठेगाना विवादास्पद हुन्छ?3विन्डोज पीसीमा आईपी ठेगाना द्वन्द्व समाधान गर्नुहोस् 1.१ विन्डोजको लागि DHCP कन्फिगर गर्नुहोस् 2.२ फ्ल्यास DNS र TCP / IP रीसेट गर्नुहोस् 3.3 IPv6 असक्षम गर्नुहोस्
मुद्दा: विन्डोजले आईपी ठेगाना द्वन्द्व पत्ता लगायो
यस नेटवर्कको अर्को कम्प्युटरको कम्प्युटरको उस्तै IP ठेगाना छ। यस मुद्दालाई सुल्झाउन मद्दतको लागि तपाईंको नेटवर्क प्रशासकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। अधिक विवरणहरू Windows प्रणाली घटना लगमा उपलब्ध छन्।
किन आईपी ठेगाना विवादास्पद हुन्छ?
यो IP ठेगाना विवादास्पद त्रुटि प्रायः स्थानीय क्षेत्र नेटवर्कहरूमा देखा पर्दछ। जस्तो कि हामीले स्थानीय कम्प्युटरमा संसाधन फाईल, फोल्डर, प्रिन्टरहरू साझा गर्न विभिन्न कम्प्युटरहरूमा साझा गर्दछौं। स्थानीय नेटवर्कहरू दुई तरीकाले प्रत्येक कम्प्युटरमा स्थिर आईपी तोक्ने र DHCP सर्भर कन्फिगर गरेर प्रत्येक कम्प्युटरमा एक विशेष दायरा भित्र एक डाईनामिक IP ठेगानाहरू तोक्ने तरीकाले सिर्जना गरिन्छ। केहि समय दुई कम्प्युटरहरूको नेटवर्कमा एउटै आईपी ठेगाना हुन्छ। त्यसकारण, दुई कम्प्युटरहरू नेटवर्क भित्र कुराकानी गर्न सक्दैन र त्रुटि सन्देश देखा पर्दछ कि त्यहाँ छ IP ठेगाना द्वन्द्व नेटवर्कमा।
विन्डोज पीसीमा आईपी ठेगाना द्वन्द्व समाधान गर्नुहोस्
राउटर पुन: सुरू गर्नुहोस्: मूलसँग मात्र सुरू गर्नुहोस् तपाईंको राउटर पुन: सुरू गर्नुहोस्, स्विच (यदि जडित छ) र तपाईंको विन्डोज पीसी। यदि कुनै अस्थायी गल्च कारण मुद्दा रिबूट / पावर चक्रको कारण उपकरणले मुद्दा खाली गर्दछ, र तपाईं सामान्य कार्य चरणमा फर्कनुहुनेछ।
असक्षम / पुन: सक्षम नेटवर्क एडाप्टर: धेरै जसो नेटवर्क / इन्टरनेट सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि यो अर्को सबैभन्दा प्रभावकारी समाधान हो। यो प्रेस गर्न Windows + R टाइप गर्नुहोस् ncpa.cpl इन्टर थिच्नुहोस् त्यसो भए तपाईको सक्रिय नेटवर्क एडाप्टरमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् असक्षम चयन गर्नुहोस्। अब तपाइँको कम्प्युटर पुन: सुरू गर्नुहोस्, त्यसपछि फेरि नेटवर्क र इन्टरनेट जडान विन्डो प्रयोग गरेर खोल्नुहोस् ncpa.cpl आदेश यस समय नेटवर्क एडाप्टरमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् (जुन तपाईं पहिले अक्षम गर्नुभयो) त्यसपछि सक्षम चयन गर्नुहोस्। त्यो जाँच पछि, तपाईंको जडान सामान्य चरणमा फिर्ता हुन सक्छ।
विन्डोजको लागि DHCP कन्फिगर गर्नुहोस्
यो व्यक्तिगत रूपमा मैले भेट्टाएको सबैभन्दा प्रभावकारी समाधान हो IP ठेगाना द्वन्द्व समाधान गर्नुहोस् विन्डोज कम्प्युटरमा। यो धेरै सरल छ यदि तपाईं एक स्थिर आईपी ठेगाना प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ (म्यानुअली कन्फिगर गरिएको) भने यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस्, DHCP कन्फिगर गर्नुहोस् IP ठेगाना स्वचालित रूपमा प्राप्त गर्नका लागि जुन प्राय जसो समस्या हो। तपाईं DHCP कन्फिगर गर्न सक्नुहुनेछ आईपी ठेगाना स्वचालित रूपमा तलका चरणहरू अनुसरण गरेर प्राप्त गर्न।
पहिले Windows + R थिच्नुहोस्, टाइप गर्नुहोस् ncpa.cpl र नेटवर्क जडान विन्डो खोल्न कुञ्जी प्रविष्ट थिच्नुहोस्। यहाँ तपाइँको सक्रिय नेटवर्क एडाप्टर मा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र गुणहरु छान्नुहोस्। इन्टर्नेट प्रोटोकोल संस्करण Select (TCP / IPv4) चयन गर्नुहोस् र गुण क्लिक गर्नुहोस्। नयाँ पपअप विन्डो खुला छ, यहाँ रेडियो बटन चयन गर्नुहोस् स्वत: आईपी ठेगाना प्राप्त गर्नुहोस्। र छनौट गर्नुहोस् DNS सर्भर ठेगाना स्वचालित रूपमा प्राप्त गर्नुहोस् तल देखाइएको छविको रूपमा। क्लिक गर्नुहोस् ठीकमा TCP / IP सम्पत्ती विन्डो, स्थानीय क्षेत्र जडान सम्पत्ती विन्डो बन्द गर्न, र तपाईंको कम्प्युटर पुनःस्टार्ट गर्नुहोस्।
फ्ल्यास DNS र TCP / IP रीसेट गर्नुहोस्
यो अर्को प्रभावकारी समाधान हो यदि तपाईं पहिल्यै स्वचालित रूपमा आईपी ठेगाना प्राप्त गर्नका लागि DHCP कन्फिगर गर्नु भएको छ र IP द्वन्द्व त्रुटि सन्देश प्राप्त गर्दा DNS क्यास फ्लश गर्नुहोस्, र TCP / IP रिसेट गर्नुहोस् DHCP सर्भरबाट नयाँ IP ठेगाना नवीकरण गर्नेछ। सम्भवतः तपाईको प्रणालीमा यस समस्यालाई फिक्स गर्नुहोस्।
DNS क्यास फ्लस गर्न र पहिले TCP / IP लाई रिसेट गर्नुहोस् प्रशासकको रूपमा आदेश प्रम्प्ट खोल्नुहोस्। फेरी एक पछि कमांड प्रदर्शन गर्नुहोस् र उही कार्यान्वयन गर्न इन्टर थिच्नुहोस्।
यी कमान्डहरू प्रदर्शन गरिसके पछि कमाण्ड प्रम्प्ट बन्द गर्न बन्द गर्नुहोस् टाइप गर्नुहोस्, र परिवर्तनहरूको प्रभाव लिनको लागि तपाईंको विन्डोज कम्प्युटर पुनःस्टार्ट गर्नुहोस्। अब अर्को सुरु जाँचमा, त्यहाँ त्यहाँ छैन IP ठेगाना विरोधाभास तपाईंको पीसीमा त्रुटि सन्देश।
IPv6 असक्षम गर्नुहोस्
फेरी केहि उपयोगकर्ताहरु रिपोर्ट गर्नुहोस् IPV6 असक्षम गर्नुहोस् यसलाई समाधान गर्न मद्दत गर्नुहोस् IP ठेगाना विरोधाभास त्रुटि सन्देश। तपाईं तलको अनुसरण गरेर यो गर्न सक्नुहुनेछ।
विन्डोज + आर टाइप गर्नुहोस्, टाइप गर्नुहोस् ncpa.cpl , र थिच्नुहोस् कुञ्जी प्रविष्ट गर्नुहोस्।
नेटवर्कमा, जडान विन्डो सक्रिय नेटवर्क एडाप्टर चयन सम्पत्तीहरूमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस्।
नयाँ पपअप विन्डोमा IPv6 अनचेक गर्नुहोस् छविलाई तल देखाईएको रूपमा।
क्लिक गर्नुहोस् ठीक छ लागू गर्न र हालको विन्डो बन्द गर्न र समस्या समाधान भएको जाँच गर्नुहोस्।
विन्डोज पीसीमा आईपी ठेगाना द्वन्द्व समाधान गर्नका लागि यी केहि प्रभावकारी समाधानहरू छन्। म निश्चित गर्दछ कि यी समाधानहरू 'विन्डोजले एउटा आईपी ठेगाना द्वन्द्व पत्ता लगाएको छ' ठीक गर्नुहोस् र तपाईंको नेटवर्क र इन्टरनेट जडान सामान्य रूपमा काम गर्न सुरू गर्नुहोस्। अझै, यस आईपी ठेगाना विवादास्पद समस्याको बारेमा कुनै पनि मद्दत चाहिन्छ तल टिप्पणीहरूमा छलफल गर्न स्वतन्त्र महसुस।
नेटफ्लिक्स पीसीमा लोड भइरहेको छैन
समाधान गरिएको: DNS सर्भर विन्डोज १० मा त्रुटि प्रतिक्रिया गरिरहेको छैन
विन्डोजले उपकरण वा स्रोत (प्राथमिक DNS सर्भर) को साथ कुराकानी गर्न सक्दैन।
विन्डोज १०, .1.१ र in मा कसरी DNS Resolver क्यास फ्लश गर्ने
अद्यावधिकहरूको लागि जाँचमा अडिग छ? Working काम गर्ने समाधान
प्रदर्शन ड्राइभरहरू कसरी पुन: स्थापना गर्ने
अनुप्रयोगहरूलाई एसडी कार्डमा सार्नुहोस्
एनवीडिया इन्स्टलर विन्डोज १० लाई असफल भयो
क्रोम टास्क म्यानेजर ब्राउजर उच्च cpu
गुगल क्रोम १०० सीपीयू प्रयोग गर्दै
विन्डोज समय सेवा चलिरहेको छैन